Ny WHO dia nitsikera ny fitsinjarana tsy mitovy ny vaksinin'ny satroboninahitra vaovao
Tsy miomana amin'ny areti-mandringana Covid-19 izao tontolo izao ary mila mandray fepetra hentitra sy mahomby kokoa mba hampihenana ny fahasimbana ankapobeny ateraky ny areti-mifindra, hoy ny Vondron'asa mahaleo tena miomana amin'ny famonoana sy ny valim-bavaka notarihan'ny World Health Organization, tamin'ny tatitra iray. Navoaka ny Alatsinainy. Ity dia ...
Novel Coronavirus Hita any Alemana
Nahitana karazana virus hafa momba ny virus Covid-19 tany Bavaria, atsimon'i Alemana, ary misy porofo vonjimaika milaza fa tsy mitovy amin'ilay fantatra ny aretina. Hita tao amin'ny tanàna iray any Bavaria io aretina io. Lozam-pifamoivoizana vaovao iray no inoana fa voamarina tamin'ny 35 tamin'ireo olona 73 voamarina fa ...
18 karazana karazana virus corona vaovao hita tao amin'ny vehivavy iray any Russia
Tamin'ny vaovao 13 janoary, vao tsy ela akory izay, ireo manam-pahaizana rosiana dia nahita karazana virus virosy mutant miisa 18 tao amin'ny vatan'ny vehivavy tsy manana hery fiarovan-tena ambany, ny ampahan'ny karazany ary ny virus vaovao miova dia hita any Angletera dia mitovy, misy karazany 2 ny mutation miaraka amin'ny minitra Danoa ...
Manodidina ny 300.000 ny tranga COVID-19 vaovao no re eran'izao tontolo izao tao anatin'ny iray andro. Ny karazana karazana virus dia hita any amin'ny firenena maro
Raha ny antontan'isa farany avy amin'ny Johns Hopkins University, hatramin'ny 2027 ora Beijing tamin'ny 16 Aogositra, ny totalin'ny tranga COVID-19 voamarina manerantany dia nihoatra ny 21.48 tapitrisa, ary ny isan'ny maty dia nihoatra ny 771,000. Nilaza ny Fikambanana WORLD Health fa manodidina ny 300,0 ...
Karazana COVID-19 miova no fantatra voalohany tany Slovakia
Tamin'ny 4 Janoary, Marek Kraj I, minisitry ny fahasalamana any Slovakia, dia nanamafy tamin'ny media sosialy fa ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana dia nahita ny mutant Novel Coronavirusb.1.1.7, izay nanomboka tany Angletera, tany Michalovce atsinanan'ny firenena, na dia tsy nanao izany aza izy. ambara ny isan'ny tranga mut ...
Mandefa programa fanaovana vaksiny betsaka i Indonezia
Amin'ny maha firenena firenena fahefatra be mponina indrindra azy, i Indonezia no firenena traboina indrindra any Azia atsimo atsinanana. Nilaza ny Sampan-draharahan'ny sakafo sy zava-mahadomelina any Indonezia (BPOM) fa hanaiky haingana ny fampiasana vaksinin'ny vovoka sinovac izy ireo. Nilaza ny minisitera teo aloha fa manantena ny hanome ...